Global Voices teny Malagasy » Libya: Nitombo tao Misrata ny Helok’i Gadhafi. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Marsa 2011 5:30 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libia, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Politika, Vaovao Mafana
Ao anatin'ny tantaran'ny fandravana sy ny fiakaran'ny isan'ny maty, nifoha maraina ny olom-pirenena Libyana androany noho ny vaovao momba ny fahafahan'ny Zintan sy ny fandroahana ireo tafik'i Gaddafi ao Addabiya. Nandritra izany, nanohy nijery ny zava-mahatsiravina sy ny habibiana mibaribary ao Misrata izao tontolo izao, izay mbola notohizan'ny tafik'i Gaddafi nandritra ny alina.
Indreto fitetezana ireo fihetseham-po tao amin'ny Twitter:
Libya 2 Martsa
Tahaka ny mahita an'i Zintan afaka. Toa hisy vaovao mahafaly (efa voamarina) ihany koa avy any Misrata ato ho ato, ary Tombony azo any Ajdabiya.
theriverfed  5 ora lasa 
Hitahy ny vahoaka mahery fo any Zintan anie Andrimanitra. Miaraka amin'ny fanampian'ny daroka ataon'ny mpiara-dia ka miezaka manafaka ny tanànany indray. Misrata no inshallah manaraka.
ChangeInLibya  6 ora lasa 
#Zintan  noafahana indray! nitsoaka ireo mpandrava efan'i #Gaddaf i  ary namela fiara mifono vy sy fitaovam-piadina mahery vaika sasantsasany http://bit.ly/esP9oW  #Libya 
Tripoli17Feb  5 ora lasa 
@osamasolieman : Lehilahy naratra tao Zintan no nilaza ahy fa nomen'i #Gaddafi  vola 250,000 tsirairay mba hiady. Saingy nandà izy ireo #feb17  #Libya 
4libya  5 ora lasa 
#Zintan  efa zatra #Libya  tonga tao #Tunis  ireo tanora ary nilaza fa manana trano fametrahana fitaovam-piadiana ny milisin'i #Gadafi  eo akaikin'ny#Zintan  izay mety kendreny mba hiarovana ireo olo-tsotra.
Liberty4Libya  10 ora lasa 
Namono olona tao #Misrata  ny tafik”i #Gaddafi . Mila mihetsika ny tafiky ny mpiara-dia (miangavy indrindra e) PLZ PLZ
FreeLibyanman  8 ora lasa 
Mitohy ny famonoan'olona ao Misrata, tsy hisy ho tafajanona intsony rehefa avy eo #feb17  #libya 
NohaZayed  10 ora lasa 
Mbola tafihina foana i Misrata ary darohan'ny tafik'i Gadhafi baomba, mbola mitohy ny fanafihana ka mampanahy indrindra ny maha-olona #feb17  #libya 
saika madio ny tanàna ao #Alzzawia , tsy misy olona tsaboina..Ankehitriny, miaina izany toe-javatra izany koa i #Misrata , ka faly amin'izany ny#Erdogan .
FreeLibyanman  10 ora lasa 
LPC: Niezaka nandefa mailaka tamin'ireo tafiky ny mpiara-dia ny vahoaka ao #Misrata  mba hijery miaraka ny fandrindrana ny tanjona ao Misrata -tsy nisy valiny || #Libya 
Tripolitanian  6ora lasa 
Raha voavono i #Khamis  zanaka lahin'ny MPAMONO OLONA, hanao HADALANA i#Gaddafi  ao #Libya  mba hamalifaty, handeha hifantoka amin'ny VONOAN OLONA ao #MISRATA .
Almisryyy  10 ora lasa 
Tokony afaka mikendry tsara ny fiara mifono vy an'i #Gaddafi  ireo mpiara-dia, ao ivelan'ny faritra fonenana ao #Misrata  izany.
Tripolitanian  10 ora lasa 
**Ireo kinga amin'ny fitifirana ao#Misrata , tsy misy volabe afaka hividy ny fandriampahalemana ho anao eto an-tany na any an-danitra ! #libya  #misrata  #curses 
nighbee  10 ora lasa 
LPC #Misrata : Niezaka nitondra kinga amin'ny fitifirana izahay mba hanakana azy ireo tsy hatory amin'ny alina. Vahaolana tsotra izany. #libya 
feb17voices  13 ora lasa 
LPC #Misrata : Niasa izahay mba hivoaka ny tanàna manodidina ireo tafik'i #Gaddafi  ao anatin'i #Misrata  (feo afaka fotoana fohy) #Libya 
feb17voices  12 ora lasa 
Ny hitan'ny LPC (Anglisy) http://bit.ly/glvi8F  namaritra ireo toerana maromaro misy ny tafik'i #Gaddafi , anisan'izany#Misrata  #Libya 
feb17voices  11 ora lasa 
Vaovao: Tsy mampiasa “anesthésie” ny mpitsabo ao amin'ny hopitaly Misrata. http://bit.ly/gcffFF  tsy misy fanafody manala fanaintainana #humanrights , #medicalethics 
pyramidmedicine  17 ora lasa 
Mahafantatra ny rehetra raha nalain'ny revolisionera indray ny hopitaly ao #Misrata ?
Tripolitanian  17 ora lasa 
Ny tafik'i#Gaddafi  nanafika ny moské tao #Misrata-azafady  jerevo izany any amin'ny farany http://youtu.be/SQVeLelLYts  Tsy misy toerana hivavahana izay tokony ho kendrena 🙁
Tripolitanian  14 ora lasa 
ampy ny 90 andro? “@NickKristof : Tao Ajdabiya n Misrata, toa mandeha tsara ny ao anaty vahoaka ao #Libya . Omeo ny mpikomy ny fotoana. Naka 10 herinandro ny tao Kosovo.”
kasanmulyono  17 ora lasa 
Haza ho an'olona tsirairay i Libya, Ny “Afera Maloto” dia hampisaraka ireo #Libya  Atsinanana & Andrefana & manakana izany tsy hiseho ny ao #Misrata , TSAROVY NY TENIKO
Almisryyy  18 ora lasa 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/27/15451/
 5 ora lasa: http://twitter.com/theriverfed/status/51484602170224642
 6 ora lasa: http://twitter.com/ChangeInLibya/status/51476971632345088
 #Gaddaf i: http://search.twitter.com/search?q=%23Gaddafi
 5 ora lasa: http://twitter.com/Tripoli17Feb/status/51483515568656384
 5 ora lasa: http://twitter.com/4libya/status/51480335304761344
 10 ora lasa: http://twitter.com/Liberty4Libya/status/51425978097995777
 8 ora lasa: http://twitter.com/FreeLibyanman/status/51461514716131328
 10 ora lasa: http://twitter.com/NohaZayed/status/51425548777422848
 10 ora lasa: http://twitter.com/NohaZayed/status/51420323853242368
 10 ora lasa: http://twitter.com/FreeLibyanman/status/51422218474897408
 6ora lasa: http://twitter.com/Tripolitanian/status/51488813645705216
 10 ora lasa: http://twitter.com/Almisryyy/status/51423452514631680
 10 ora lasa: http://twitter.com/Tripolitanian/status/51429573207928832
 10 ora lasa: http://twitter.com/nighbee/status/51420671003201537
 13 ora lasa: http://twitter.com/feb17voices/status/51389386562093056
 12 ora lasa: http://twitter.com/feb17voices/status/51395859526590464
 11 ora lasa: http://twitter.com/feb17voices/status/51405361030238208
 17 ora lasa: http://twitter.com/pyramidmedicine/status/51434637121159168
 17 ora lasa: http://twitter.com/Tripolitanian/status/51429716946726912
 14 ora lasa: http://twitter.com/Tripolitanian/status/51479148677439489
 17 ora lasa: http://twitter.com/kasanmulyono/status/51435740541878273
 18 ora lasa: http://twitter.com/Almisryyy/status/51418843750469632